နမူနာပြင်ဆင်ခြင်းစက်ရုံ - တရုတ်နမူနာပြင်ဆင်မှုထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
DRK-ER စီးရီး၏ လျှပ်စစ်အပူပေးသည့် စဉ်ဆက်မပြတ် အပူချိန် အပူပေးပန်းကန်ပြားစီးရီး
★1.အီတလီမှတင်သွင်းသောစွမ်းအင်ခလုတ်ကိုလက်ခံသည်။★2.ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းသည် အပူအမြန်နှုန်းကို အမြင့်ဆုံးပေးသည်။★3.ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းသည် အပူအမြန်နှုန်းကို အမြင့်ဆုံးပေးသည်။4. glass-ceramics ၏ နိမ့်သော ချဲ့ထွင်မှုကိန်းဂဏန်းသည် မြင့်မားသော အပူချိန်အခြေအနေအောက်တွင် bearing မျက်နှာပြင် ပုံပျက်မသွားကြောင်း သေချာစေသည်။5:316L Stainless Steel ကို စက်တစ်ခုလုံး၏ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းတွင် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း သေချာစေရန် ထုတ်ကုန်တစ်ဝိုက်တွင် အသုံးပြုပါသည်။လျှပ်စစ်အပူပေးစက် ထုတ်လုပ်သူ...
DRK-FX-306 မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် Stainless အပူပေးပန်းကန်ပြား
ကြွေထည်မျက်နှာပြင်၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်နှင့် stainless ။(Teflon coating ရှိသော မျက်နှာပြင်သည် မြင့်မားသော အပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်မရှိပါ၊ Stainless Steel မျက်နှာပြင်သည် မြင့်မားသော အပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း သံချေးတက်ရန် လွယ်ကူပါသည်။)
Ceramic Glass Surface ဖြင့် DRK-FX-306A အပူပေးပန်းကန်
1 အီတလီမှတင်သွင်းသောစွမ်းအင်ချိန်ညှိခလုတ်။2 အပိတ်ဒီဇိုင်းသည် ပွင့်နေသောမီးတောက်များကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး ဘေးကင်းမှုအဆင့်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ သမားရိုးကျ သန့်စင်နိုင်သော အုတ်များ၏ ကျိုးလွယ်သောလက္ခဏာများကို ရှောင်ရှားရန် မီးဖိုကိုယ်ထည်နှင့် အပူပေးဝါယာကြိုးများကို အသေဖြင့် ထုရိုက်ထားသောကြောင့် အပူ၏ထိရောက်မှုကို များစွာတိုးတက်စေပါသည်။
DRK-FX-D306 Sox အမျိုးအစား အဆီထုတ်ယူရေး တူရိယာ
ကိရိယာသည် အပူနှင့် အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ ထုတ်ယူမှု၊ သုတ်ရည်ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်းမတိုင်မီ အခြောက်ခံခြင်းစသည့် အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန် လွယ်ကူစေသည်။
1. အဆိုပါကိရိယာသည် အပူနှင့် အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ ထုတ်ယူမှု၊ သတ္တုဓာတ်ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်းစသည့် အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန် လွယ်ကူစေသည်။2. ပူပြင်းနှစ်မြှုပ်ထုတ်ယူမှု၊ စုဆောင်းမှုပုလင်းနှင့် ထုတ်ယူခန်း၏ နှစ်ဆအပူပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို သဘောပေါက်ပါ။